Uncategorized Archives - Mero Online Guru
भाेली बैशाख २१ गते भोलि मध्य भोटेकोशीको आइपिओ प्रभावित स्थानिय जनताकाे लागी निश्कान गर्ने छ । प्रभावित स्थानियलाइ निश्कासन पश्चात सबै सर्वसाधारण लाइ दिइने छ । यी स्थानियले ६० लाख कित्ता सेयमा अाफ्नाे अावेदन दिन सक्नेछन् स्थानिय बाहेक यस जिल्ल सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं ७ र ८ घुमथाङ गाविस र मानेश्वरा गाविस वडा… Continue reading भोलि मध्य भोटेकोशीको आइपिओ ।
Categorized as Uncategorized Tagged IPO
हुनत राम्राे कम्पनिकाे ५० कित्ता पर्दा कस्लाइपाे खुशि र फाइदा नहाेला र तर याे व्यवस्थाले खुशि र फाइदा भन्दा पनि वेफाइदा हुने धेरै भएकाे देखिन्छ। हाल नेपालमा सेयर बजारमा IPO मा अावेदन दिदा कम्तिमा १००० रूपैया बराबरकाे र कम्तिमा १० कित्ता दिन मिल्ने व्यवस्था छ । तर अाउदाे दिनमा भने याे व्यवस्था परिवर्तन गरी ५०… Continue reading न्युनतम १० कित्ता बाट ५० कित्ता बनाउदा कत्तिकाे प्रभावकारी? यस्ताछन् फाइदा भन्दा वेफाइदा ।
Categorized as Uncategorized Tagged IPO new Policy
कुमारी इक्‍विटी फण्डको साधारण सेयर अाज शुक्रबारबाट खुल्‍ने भएको छ । कुमारी सामूहिक लगानी कोषकाे सञ्‍चालन हुने यो फण्डले सेयर बिक्रिकाे लागी अाज सेयर जारि गरेकाे छ । मेराे सेयरमा याे देखाइसकेकाे छ र सजिलै भर्न सकिन्छ, न्युनतम भनेकाे थाेरैमा अथवा कम्तािमा १०० युनिट अर्थात १०० कित्ता काे निवेदन दिनुपर्नेछ एक कित्ताकाे मुल्य १० रहेकाे… Continue reading म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नेकाे लागीअाजदेखि अायाे इक्युटि फण्ड।
सुरूमा हेर्दा तेति रमाइलाे र राम्राे नदेखिए पनि अन्त्यसँम्म अति उपयाेगी र रमाइलाे पनि छ। याे मुभिमा सेयर बजारमा डुब्नबाट कसरि बच्ने र डुब्न लागेकाे संकेत साथै सेयर बजारमा कसरि लगानि गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा जागरूक गराउन खाेजीएकाे छ । याे मुभि अर्थात फिल्म हेरिसकेपछि अवश्य तपाइले पनि याे उपयाेगी र रमाइलाे मान्नुहुने छ । याे नेपाली… Continue reading हेर्नै पर्ने सेयर बजारकाे नेपाली मुभि जुन अति उपयाेगी छ ।
Categorized as Share Market, Uncategorized Tagged Share market movie in Nepali, हेर्नै पर्ने सेयर बजारकाे नेपाली मुभि
नेपाल धिताेपत्र बाेर्ड बाट ज्याेतिलाइफ इन्साेरेन्स कम्पनिले IPO निस्काशन गर्नकाे लागि स्विकृत प्राप्त गरेकाे छ । अब छिट्टैनै बजारमा IPO ल्याउदै छ यसले फागुन ९ गते स्विकृत प्राप्त गरेकाे हाे । ज्याेतिलाइफ इन्साेरेन्स कम्पनिकाे IPO अबकाे 8/10 दिन भित्रमा सबैलाइ निस्काशन गर्ने हामी अनुमान गर्न सक्छाै । यसकाे IPO हप्ता दशदिन भैसकेपछि हामी… Continue reading ज्याेतिलाइफ इन्साेरेन्सकाे IPO कहिले देखि पाइन्छ त भर्न?
नेपालमा विभिन्न कम्पनिहरूले अाफ्नाे IPO जारी गर्ने गरेका छन् । तपाइ शेयर बजारमा नया लगानीकर्ता अथवा पुरानाे लगानीकर्ता हुनुन्छ जाेसुकै भएपनि पहिलाे बजार IPO अवश्य भर्नु भएकाे छ र अब नयाँ अाउने IPO काे पर्खाइमा पनि अवश्य हुनुन्छ । केहि दिन अघि ठुलाे IPO निफ्राले सबैलाइ खुशी बनाइकाे छ । किन कि यसले सबैलाइ पूग्ने… Continue reading २ अर्ब २३ कराेड बरावर १२ कम्पनीकाे IPO अाउदै ।